M/weyne Faroole oo bogaadiyey ciidanka amniga ee Puntland & dhaleeceeyeyna warbixino laga qoray Puntland. – Radio Daljir
M/weyne Faroole oo bogaadiyey ciidanka amniga ee Puntland & dhaleeceeyeyna warbixino laga qoray Puntland.
Maarso 23, 2010 12:00 b 0
Bossaso, Mar 23 – M/weynaha Puntland C/raxmaan M. Faroole oo ay weheliyaan madax ka tirsan golayaasha dawlada Puntland ayaa safar hawleed uga bilawday magaalada Bossaso. M/weyne Faroole oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in ujeedada safarka waftigu ay tahay la shaqaybta maamulka cusub ee gobolka, isaga oo intaa ku daray in mudada uu waftigu joogo Bossas ay shirar wadatashi ah la yeelan doonaan madaxda gobolka, Issimada, iyo shacabka gobolka Bari.
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo ku baaqay in dib u dejin loo sameeyo dad rayad ah oo ka barakacay agagaarka madaarka Adam Cadde, Muqdisho.
Col. Maxamed S. Jaqanaf, ku xigeenka taliyana ciidanka bilayska oo aan ka waraysanay burcad badeed Somali ah oo lagu wareejiyey Puntland.